Gxila kwizifundo kunye nomsebenzi. Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
"Ndingunyana kaThixo; Ke ngoko, ndinamandla amakhulu oxinzelelo lwengqondo. Lo msebenzi ndiwenza noThixo. Kungenxa yoko le nto ndikwazi ukugxila ngokupheleleyo ndize ndifumane iziphumo ezincumisayo. "
Ngombulelo kuloo mthandazo woxinzelelo, unokufumana ukuzola kunye nengqondo ecacileyo yokwenza imisebenzi yakho. Ngale ndlela, ufezekisa iinjongo zakhe ngaphandle kokukhathazeka malunga neziphazamiso kunye nezithintelo zeemvakalelo, kunye noxinzelelo kunye noxinzelelo.
Ngezinto ezininzi zangaphandle ezikunqanda ukuba ungagxili kwinjongo enye, unokuziva unyanzelekile ukuba ugqibezele umsebenzi ngexesha. Okanye, ungomnye wabantu abangakwaziyo ukuhlala imizuzu engama-30 phambi kwencwadi apho izifundo zakho ziyehla ezona ngxolo incinci yesitrato.
Nangona kunjalo, ngokholo olukhulu kumandla omoya asijikelezileyo, siyaqinisekisa ukuba ekugqibeleni uya kuba nakho ukuthatha inxaxheba kulomsebenzi wakho. Ukumncedisa kule njongo (nokuba ayenzeki kwaphela), sikhethe ukhetho lwezivakalisi ukuze sigxile kufundo kunye nomsebenzi.
1 Umthandazo woxinzelelo
1.1 1. Umthandazo wokugxininiswa kukaSanta Thomas Aquinas (uhlobo 1)
1.2 2. Umthandazo wokugxininiswa kukaSanta Thomas Aquinas (uhlobo 2)
1.3 3. Umthandazo wokugxila emsebenzini.
1.4 4. Umthandazo wokugxilwa komntwana.
1.5 5. Umthandazo wokugxininiswa kwesikolo.
1.6 6. Umthandazo woxinzelelo lokufunda
Njengoko sithetha ngomthandazo wokuxakeka, asinakuyeka ukuqala nge-Aquino. Kungenxa yokubayingcwele ethandwayo ngesipho sobukrelekrele obukhulu, ulwazi olunolwazi kunye nesakhono sokuchaza unxibelelwano oluntsonkothileyo lwendalo.
Apha siza kukubonisa iinguqulelo ezimbini zomthandazo omnye woxinzelelo lwe-Saint Thomas Aquinas. Emva koko unika eminye imithandazo ukugxila kufundwe nomsebenzi.
1. Umthandazo wokugxininiswa kukaSanta Thomas Aquinas (uhlobo 1)
«UMdali ongenakuphikiswa, ovela kubuncwane bobulumko bakho, wasusa ii-hierarchies zeengelosi, wazibeka ngokulandelelana ezulwini;
Nguwe owasasaza indalo yonke kunye nemvisiswano entle;
Wena, ungumthombo wenene wokukhanya kunye nomgaqo wobulumko obalaseleyo, usasaza ubukhazikhazi phezu kobumnyama bengqondo, ususa ubumnyama obuphindaphindwe kabini endazalwa ngabo: isono nokungazi.
Wena wenza ulwimi lwabantwana lube nesiqhamo, lwenza ulwimi lwam lube lusasazi lweemilebe zam.
Ndinike ubukhali bokuqonda, ubuchule bokugcina, ubuqili bokutyhila, ukukhululeka kokufunda, ubabalo oluninzi lokuthetha nokubhala.
Ndifundise ukuqala, ndinkcenkceshele ukuqhubeka kwaye ndinyamezele de kube sekupheleni.
Wena uyinyaniso, uyinyaniso, wena mntu uhlala uhleli, ulawula ngonaphakade kanaphakade.
2. Umthandazo wokugxininiswa kukaSanta Thomas Aquinas (uhlobo 2)
Umyili ongenakusebenza, Wena, ongumthombo wenene wokukhanya nesayensi, uthulula ebumnyameni bokuqaqamba kwam ukukhanya kwakho.
Ndiphe ubukrelekrele bokuqonda, inkumbulo ukuze ndiyigcine, ndikwazi ukufunda, ndinobuqili ukutolika kunye nobubele obuninzi bokuthetha.
Thixo wam, hlwayela imbewu yokulunga kwakho kum.
Ndenze ihlwempu ndingabinosizi, ndithobekile ngaphandle kovuko, ndonwabile ngaphandle kokugcobisa,
onyanisekileyo ngaphandle kohanahaniso; yenza kakuhle ngaphandle kokuzingca, lungisa ummelwane wakho ngaphandle kokukhukhumala, vuma ukulungiswa kwakho ngaphandle kokuzingca; Ngamana ilizwi lam kunye nobomi bam bungangqinelani.
Ndiphe ubunyani benyani, ubukrelekrele ukuze ndikwazi, ukukhuthala ukukujonga, ubulumko bokukufumana, isimilo esihle sokukuvuyisa, ukuzithemba kukulinda, ukuqina ukwenza ukuthanda kwakho.
Ndikhokele, Thixo wam, ubomi bam, Ndincede ndazi into oyicelayo kum kwaye undincede ndiyenze ukuze kulungelwe mna nabo bonke abantakwethu.
3. Umthandazo wokugxila emsebenzini.
Namhlanje, uluvo lwendawo evulekileyo emsebenzini lubanzi njengecebo lokuphucula nokwenza ngcono imveliso. Ngenxa yoko, iiofisi ezinje ngeGoogle (enegumbi lemidlalo, ithrekhi ye-sled, umboniso bhanyabhanya, igumbi lokuzonwabisa nokunye okuninzi) ithandwa kakhulu. Nangona kunjalo, okungathethwayo mntu malunga nobunzima bokugxila emsebenzini ngexesha leeofisi.
Ukuba le yimeko yakho, thembela kuThixo ngomthandazo ukuba ugxile kulo msebenzi:
“Namhlanje, Thixo wam, bendifuna ukukungcwalisa engqondweni yam. Iingcinga zam zihamba yonke indawo el mundo kwaye ukucinga kwam rhoqo kwakha iinqaba zesanti kunye ne-utopia yozuko lomntu. Namhlanje ndibangcwalisela ingqondo yam neengcinga zam kuwe ngokwenza indumiso nozuko kwiNkosi yam nakuThixo wam.
Ndivumele, amaxesha ngamaxesha phakathi kwemini, ndinenjongo eqinileyo yokugxininisa iingcinga zam ngokupheleleyo kuBukho baKho abangcwele kwaye ndinxibelelanise ukwazisa kwam ngo Nyana kaThixo kunye nomjelo wendumiso nombulelo osasazwa ngokungapheliyo nangamaxesha onke. ewe, ewe, ewe, ngonaphakade kanaphakade. Amen!
4. Umthandazo wokugxilwa komntwana.
Kukho amaxesha apho ubona unyana okanye intombi yakho idlula ubunzima ekuqwalaseleni izifundo kwaye uziva engancedi ukuba unakho, ungamfundela kwaye uyomamela kwiimviwo. Kodwa ulwazi lolona lwazi luxabisekileyo unokufumana. Ngale ndlela unokuthembela kuncedo olungentla kunye nomthandazo wakho woxinzelelo.
“Usomandla uYesu Krestu unenceba kunyana wam kwaye ungamyeki ahambe kakubi ezifundweni nasezilingweni. Mnike ubulumko, ingqalelo eklasini, kunye nobukrelekrele ngokwaneleyo ukuze akwazi ukuhlala ephumelela esikolweni kwaye afezekise ikamva elizele yindumiso. UYesu Kristu, ukuba ndifanelekile, ubeke entliziyweni nasengqondweni yonyana wam uthando lukaKristu kunye noxanduva lomKristu kwaye uhlala emenza ukuba aphumelele. (Thandaza oobawo abasixhenxe, Thoba oMariya abaShumi asixhenxe kunye neeChule ezisixhenxe
5. Umthandazo wokugxininiswa kwesikolo.
Lo mthandazo wokugxininiswa kwesikolo usebenzayo nakweyiphi na iklasi, nokuba kukwikholejini okanye esikolweni. Kungenxa yokuba siyayazi indlela ekunzima ngayo ukuchitha iiyure uhleli phambi kukatitshala ngaphandle kokulahleka. Ke ngoko musa ukuchitha ixesha lakho kunye nokuthembela kumandla kaThixo.
“Mnumzana, ndicinga ukuba kufanelekile ukufunda!
Ngokufunda, izipho ondinike zona ziya kuvelisa ngakumbi, kwaye ke ndinokusebenzela ngcono. Ngokufunda, ndiyazingcwalisa. Nkosi, ngamana ungafunda ukwenza iinjongo ezintle kum!
Yamkela, Nkosi, inkululeko yam, inkumbulo yam, ubukrelekrele bam kunye nentando yam. Kuwe, Nkosi, ndizifumene izakhono zokufunda.
Ndizibeka ezandleni zakho. Yonke into yeyakho. Yonke into mayenziwe ngokwentando yakho! Nkosi, ndingakhululeka! Ndincedise ekuqeqesheni, ngaphakathi nangaphandle.
Nkosi, ndingayinyani! Ngamana amazwi am, iintshukumo kunye nezithula zingangaze zikhokelele abanye ukuba bacinge ukuba andiyiyo into engeyiyo. Ndihlangule, Nkosi, ekubeni ndingalingwa.
Nkosi, ndingavuya! Ndifundise ukuhlakulela imvakalelo yokuhlekisa kwaye ndifumane kwaye ndibone ubungqina benjongo zovuyo lokwenene. Ndinike, Nkosi, ulonwabo lokuba nabahlobo kwaye wazi ukuba ungabahlonipha njani ngencoko kunye nesimo sengqondo.
UThixo uBawo owandidalayo: ndifundise ukwenza ubomi bam bube ngumsebenzi wobugcisa onyanisekileyo!
Jesus Divine: phrinta kum amanqaku omntu wakho!
UMoya oyiNgcwele oyiNgcwele: khanyisa ubumnyama bokungazi kwam; ubetha ubuvila bam; Beka igama elifanelekileyo emlonyeni wam!
6. Umthandazo woxinzelelo lokufunda
Umthandazo wokugqibela oza kugxila kuwo uqhubeka kakuhle esikolweni. Kuba siyayazi eyakho iqinisekisiwe ukuba uzinikezela esikolweni kwaye ufumane amanqaku amahle. Nangona kunjalo, oku kunokwenzeka kuphela xa unokuthi utsale umdla kwaye uzimisele. Kungenxa yoko le nto sizisa emthandazweni ukuze ugxile kwizifundo zakho.
“Nkosi, Thixo wam noBawo, Inkosi indisikelele ngengqondo entle ngokundinika amandla okufunda yonke into elungele mna.
Kungenxa yoko le nto ndiza kuwe ndicela ukuba undithambise kwaye undisikelele ngengqondo ukuze ndikwazi ukufunda zonke izifundo zekharityhulamu yam, kubandakanya nale, endinobunzima obungakumbi kuyo.
Nkosi, ukuba ndigqithe kwimida yam ngentsikelelo yakho ebomini bam kwaye ukuba ndiligqiba eli xesha lobomi bam bomfundi ngoncedo lwakho, ndisikelele ootitshala bam ukuba babe zizixhobo zobulumko eziyinyani ngobomi bam.
Ngale mithandazwe yokugxila kunye nokugxila okukhulu, akukho sithintelo sikuthintelayo ekufikeleleni kwiinjongo zakho.